Mogadishu Journal » 2021 » March » 19
Dowladda Kenya oo war cusub oo yaab leh ka soo saartay dacwadda Badda (Akhriso)
Dawladda Kenya ayaa qoraal ay soo saartey waxay ku sheegtay in sababta ay dacwadda badda uga qaybgali weyday ay tahay Cadaalad darrada maxkamadda ICJ, xanuunka Covid19 oo hoos u dhigey diyaargarowgii Kenya, iyo Garsoore Abdulqawi Yusuf oo ah garsoore Soomaali ah. Sidoo kale,...
Dowlada oo maanta Gedo ka dejisay Ciidamada Gor Gor iyo hub badan (Sawirro)
Waxaa maanta garoonka diyaaradaha Doolow ee gobolka Gedo ka degay diyaarado siday ciidamo badan oo katirsan milatariga Soomaaliya gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Gor Gor. Ciidamadan oo laga qaaday magaalada Muqdisho ayaa horey usii qaatay hubka nuucyadiisa kala...
Mareykanka oo War kulul kasoo saaray Jahwareerka ka taagan Siyaasada Soomaaliya
Bayaan good dhaweyd ka soo baxay xoghayahay arrimaha dibada Mareykanka Antony Blinken ayaa lagu sheegay in Mareykanku ka walaacsanyahay jahawareerka siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya, taas oo khatar ku ah amniga, xasilloonida iyo horumarka Soomaaliya. “Waxaan ugu baaqeynaa...
Nin sameeyay Goob qurux badan oo loogu magac daray Jaziirada Jaceylka (Daawo Sawirro)
Nin u dhashay Shiinaha ayaa sameeyey wax walba oo qurux iyo daraandar laga heli karo – isaga oo doonaya inuu dib u hanto jaceylkiisii kala dhaxeeyey xaaskiisa – wuxuuna jinka webiga ku beeray ubaxyo iyo geedo heemaal leh. Tallaabtiisu waxay soo jiidatay indhaha dadka ku nool...
Tababaraha Man Utd Solskjaer ayaa amaanay Henderson
Ole Gunnar Solskjaer ayaa ka hadlay qaab ciyaareedka Dean Henderson ka dib markii Manchester United ay u soo baxday wareega quarter-finalka Europa League. Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa amaanay Dean Henderson ka dib markii uu goolhayaha ilaaliyay...
Vice President Samia Suluhu Hassan sworn in as president on Friday, after the sudden death of John Magufuli from an illness. 19 Mar 2021 Tanzania’s soft-spoken Vice President Samia Suluhu Hassan on Friday was sworn in as the East African country’s first female president after the...
Heyadda NASA oo soo saartay dayax gacmeedkii ugu weynaa caalamka (Sawirro)
Wakaalada hawada sare u qaabilsan Maraykanka ee NASA ayaa si buuxda ugu guuleysatay tijaabada matoorka dayax gacmeed dunida ugu awoodda badan oo la sameeyey Matoorka ayaa daarnaa ama shidnaa muddo 8 daqiiqo ah taasoo u dhiganta qiyaasta dayax gacmeedka uu ku tagi karo masaafada u...
Maxay ka wada hadlayaan Galmudug & dowlad degaanka Soomaalida? (Sawirro)
Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo ka mid wafdi wasiirro iyo taliyaha ciidamada Nabadsugidda Galmudug oo booqasho ku jooga magaalada Wardheer ee dawlad deegaanka Soomaalida ayaa kulamo kula qaatay wafdi uu hogaaminayo dhiggiisa Hogaanka Nabadgalyada Dawlad deegaanka...